Imisebenzi yezokuphepha eDubai G4S, Faka Ezokuphepha Emhlabeni namuhla
Imisebenzi yokuphepha e-Dubai
Imisebenzi yezokuphepha ngaphakathi IDubai nase-United Arab Emirates. One of the hottest topics for job seekers. If you are searching for employment. The imisebenzi yezokuphepha eDubai kungaba inketho enhle kuwe. Ngakolunye uhlangothi, inkampani yethu ibheke phambili ekusizeni. Singa ukusiza abafuna imisebenzi emhlabeni wonke. Ikakhulukazi kusuka eNingizimu Afrika futhi Abafunayo base-India e-Dubai kanye nabakhamuzi basePakistan abasha.
Dubai City Company njalo ukunikeza isandla ngokusesha umsebenzi. Ithimba lethu njalo uqondise abafuna umsebenzi ukuthola imisebenzi yezokuphepha e-UAE. Sinethemba, ukuthi iqembu lethu lochwepheshe likwazi ukukusiza ngesikhathi sokufuna umsebenzi. Edolobheni laseDubai, ungaba nezinkampani eziningi kakhulu eziqeqeshiwe. Ukuthola imisebenzi nezinkampani ezifana neG4S, Hawk Security, Cyber ​​Security nezinye izinkampani zezokuphepha zase Dubai.
Ngakho ngalokhu engqondweni, kufanele uzame nakanjani isiqondiso esiphelele sokuthola imisebenzi yokuphepha e-Dubai. Inkampani yethu iyona mthombo oyinhloko izinkampani lapho kufanele ulayishe khona kabusha. Okwamanje e-Dubai nase-Abu Dhabi, kunezinzuzo abaphathi abacebile ngoba nokuvikeleka imisebenzi in Dubai ?.
Yiqiniso e-UAE kuyinto a imakethe ekhulayo yezimpahla zokunethezeka. Futhi ngalokhu kuza kuphela i-VIP Persona. Futhi, imakethe ekhulayo yebhizinisi elisha. Futhi ubuntu be-VIP, nabantu bebhizinisi abasezingeni eliphakeme. Bonke labo bantu badinga onogada.
Kunezinhlobo eziningana izindlela zokuthola umsebenzi. Ikakhulukazi uma sikuqondisa e-United Arab Emirates. Abahambeli abasha abazoqashwa bangalindela izinzuzo eziningana. Esinye sezibonelo ngumsebenzi oqinile ku Ukuphepha kwe-Airport Airport. Lapho inkampani entsha izoqasha inkampani yaseDubai. Bazomnika a inkontileka enhle yesikhathi eside.
Yini engiyidingayo ukuba ngibe ngumlindi?
Ukuze ube ngunogada eDubai. Udinga ukuba neqiniso elithile lokufaneleka kanye nesipiliyoni. Onogada abakhona ufisa ukusebenza ku-Emirates. Akungakhathaliseki uma bendawo abasebenzi noma izidingo zangaphandle. Bonke kufanele bahambe badlule inkambo yeviki elide elibandakanya amahora angu-36 wokuqeqeshwa kwemfundiso nokusebenza. I-Dubai Police Academy yokuphatha izinyathelo ze-3 zesitifiketi. Isiphathimandla sendawo sivivinywa ngezivivinyo ezintathu.
Okomlomo lapho udinga ukuphendula imibuzo. Ngemuva kwalokho uzobe ubhale ukuhlolwa kanye nokuhlola kolwazi olusebenzayo. Bheka amathiphu indlela yokudlula ukuhlolwa lapha. Futhi uma a ukhetho oluphumelelayo izodlula zonke izivivinyo ze-3. Inhlangano yezemfundo yaseBrithani yezemfundo yaseMelika naseGuilds ngokuqinisekile iyokunikeza isitifiketi sokunikeza isitifiketi sokugunyazwa ukuba ube ngumlondolozi.
Uhlelo lwe-Thes 3 lubandakanya amakilasi ocwaningo lwezobugebengu. Indlela yokusebenzisa imishini yokuvikela injongo. Indlela yokuphatha ukushisa komlilo nokuthi ungasesha kanjani izimoto nezakhiwo. Ehlangothini elihle lokuphepha imisebenzi e-Dubai. Ngenkathi uzofunda ngaphezu kwephesenti le-50 lezifundo eziwusizo. Ngakho-ke hhayi kuphela owaziyo ukuthi ngubani okufanele abe ngumqaphi. Kepha uzofunda ukukwenza ngendlela efanele.
Yini engizoyifunda ngenkathi ngiphatha umsebenzi wokuphepha?
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu abafundi abazofunda nazo. Ngokuvamile ukuthi ungahamba kanjani nayo imisebenzi yenkinga yamakhasimende. Ngoba ekugcineni komgwaqo hhayi kuphela abaphathi okufanele bazi nokuthi bangasivikela kanjani isithembiso. Kufanele ufunde ukuthi ungaziphatha kanjani wena nabanye esimweni esiphuthumayo. Izinto ezenziwa yilowo oqokelwe ukufunda okokuqala yindlela yokugcina indawo yobugebengu. Ngasohlangothini oluhle, lokho kuzoba isifundo kuMnyango Wamaphoyisa. Uma nje imininingwane yokuthi ungasesha kanjani isungulo noma imoto. Umuntu ophambili ofundisayo yi-International Center ye Ukuphepha nokuphepha e-Dubai Police Academy.
Zonke izifundo kanye namakilasi anikezwa ngamaphoyisa amakhulu. Ngakho kufanele wenze ngokufanele. Ngaphezu kwalokho, kufanele wazi indlela yokubhekana nayo ezinkampanini zeGulf. Ezinye izinkampani, ngokwesibonelo, zithola abafundisi bezinye izinsizakalo ezihlobene noHulumeni kanye nezentengiso ezifana ne-Civil Defense. Ngasohlangothini oluhle, konke kuzokwenzeka esikhungweni sezemfundo. Ngemisebenzi yezokuphepha eDubai, izinkampani eziningana zisungula ezazo izifundo zokuziqeqesha. Ngasohlangothini olubi, izivivinyo kufanele zithathwe esikhungweni sezemfundo.
Uhlelo lonke lokuqeqeshwa lwethulwa eDubai nase-Abu Dhabi e2005. Kepha okusemqoka ibhizinisi liqale ukusebenza ku-2008. Kuze kube manje, i-academy iqeqeshe mayelana nabasebenzi bezokuphepha be-57,000. Uhlelo lwenzelwe ngale ndlela yokuthi iningi labantu lizoludlulisa. Ngakho akudingeki ukhathazeke kakhulu ngalokho. Isilinganiso esidlulayo singaphezu kwe-80%.
Iyini umholo womlondolozi e Dubai?
Lokho kuya impela,eminye yemisebenzi yi-AED1,000 ngenyanga kuze kufike ku-8,000. Futhi-ke ngomqondo, kufanele ubheke imisebenzi yokuvikela imisebenzi. E-United Arab Emirates, konke kuxhomeke kulokho abaqashi abanakho. Yisiphi isakhiwo okwamanje ophethe ?. Ukuze uthole okwengeziwe, ungacela ezinye izinto ezivela e-Dubai nase-Abu Dhabi. Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokuthola ukuthi uthola cela abanye mayelana nomholo. Ngenxa yakho awukwazi ngempela uze ukwazi ukuthola okwangempela.
Ukuthola imisebenzi yezokuphepha eDubai kuthatha isikhathi. Okujwayelekile ukufuna umsebenzi kuthatha isikhathi. Akunandaba noma uzozama kangakanani. Ezimweni eziningi, kuzothatha cishe i-6months. Isikhathi ozosisebenzisa e-United Arab Emirates. Ihlala idlala kuwe, ikakhulukazi abafuduka kwelinye izwe.
Njengonogada Wezokuphepha, ungalindela iholo eliyisisekelo. Ngakolunye uhlangothi nesipiliyoni sakho esihle, ungaphatha iholo elihle impela. Njengomqaphi wokuphepha we-VIP wangasese, ungaphatha ngaphezulu kwe-550 kuze kufike ku-1,500 AED ngosuku. Ngasohlangothini oluhle, awudingi ukuphatha iziqu ze-MBA.
Ungathola kanjani izikhala zokuphepha e-Dubai?
Izinkampani eziningi manje seziqasha iDubai. Empeleni, yethu inkampani inemisebenzi etholakala eDubai nase-Abu Dhabi. Ikakhulu abaqondisi bezeminyango nabasizi bokuphepha kwe-VIP. Ngokujwayelekile e-Abu Dhabi ne-Dubai ungakwazi thola izinkampani eziningana ezinike amathuba afanele kubantu abalungile. The iminyaka elandelayo ibonisa ukukhula okukhulu kwemakethe yezokuphepha eMpumalanga Ephakathi.
Ngasohlangothini oluhle, abaningi izikhala zomsebenzi ziqala umbukiso. Ngaphansi kwalezo zimo, i-Emirates yathuthuka ngokuqashwa kwabaqaphi bezokuphepha emisebenzini ye-Expo 2020. Kulezi zinsuku isifunda se-GCC sesiqala ukuphatha imisebenzi enhle kakhulu yama-expats. Ikakhulu nge izinkampani e-Abu Dhabi nase Dubai. Ngaphezu kwalokho, i-expo i-2020 iyahamba futhi izinkampani ezintsha zathuthukisa izinhlelo ezikhethekile zabangaphandle. Ngakolunye uhlangothi, kufanele ubuke nezinkampani zokuqasha. Iwebhusayithi ye-Careerjet e-Dubai futhi Umsebenzi we-Monster Gulf iwebhusayithi. Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho.
Umsebenzi we-Bouncer e-Dubai
Imisebenzi yezokuphepha eDubai njenge-Bouncer yiyona ethandwa kakhulu. Idolobha lase-Dubai inkampani ihlinzeka ngohlu oluphelele lwemisebenzi yezokuphepha eDubai. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, iqembu lethu liyaphatha ulwazi oluningiliziwe mayelana nendlela yokuthola umsebenzi as a security person in Dubai. Have a look yourself how to find employment in the security sector. Because of the Ukuphepha kwe-Dubai, umsebenzi kanye nemholo kuhle kakhulu e-United Arab Emirates.
Umsebenzi we-Bouncer e-UAE ukhokhwa kahle ezimweni eziningi. Kodwa kuzodingeka ube nesipiliyoni esihle. Ngaphezu kwalokho ubukeka kahle futhi uqeqesha ukuya ejimini. Ngoba amanye ama-nightclub ku- I-United Arab Emirates ifuna usizo. Ikakhulu kusuka ezinkampanini zokuphepha zangaphandle. Enye yezinto esemqoka ngalo msebenzi ukuvikela impahla yenkampani. Ukusiza abasebenzi bendawo ngokunakekela indawo ephephile nephephile okwesikhashana.
Njengombheji, ngeke ube yi-mercenary. Inqobo nje uma uzosebenza ngokomthetho ngokungaqondile. Udinga ukuthi uqiniseke, uzogcina ukuhleleka kokugcina impilo nempahla yakho kuvikelwe ngaso sonke isikhathi. Umsunguli uthatha isenzo esinembile samakhasimende angalindelekanga. Imibiko emisha kufanele unikezwe ngokuningiliziwe kunoma yiziphi izehlakalo ezisolisayo ezenzakalweni emakilabhini. Ngaphezu kwalokho, indawo yokugibela ngokungahleliwe noma yokwakha njalo izakhiwo.
Ngaphambi kweqembu, lizovalwa. Iningi le-bounced umsebenzi e-Dubai kufaka phakathi ukuqapha nokulawula ukufinyeleleka kwamasango okwakha kanye namasango ezimoto. Esikhathini sasebusuku, umsebenzi ungahle ungavikeleki. Kepha abanye onogada bazobukela izinhlelo ze-alamu ku-CCTV. Futhi iningi lamakhamera nohlelo olusebenzayo luzokubukela I-24h usuku lokuthola izimo eziphuthumayo.
I-G4S engcono kakhulu emsebenzini wokuphepha e-UAE
IG4S yinkampani ehamba phambili emhlabeni kwezokuphepha. Okukodwa kwe izixazululo ezinhle kakhulu zabathengi. Ngaphezu kwalokho, bangomunye wabaqashi abakhulu emhlabeni wonke. IG4S ngenye yezinkampani ezihamba phambili eMiddle East ngomsebenzi. Inkampani futhi iyinkampani esebenza kakhulu Ama-G4S ku-Forbes usezingeni.
Inkampani ye-G4S inikeza izinzuzo eziningi. Kusuka umholo wesisekelo kanye nebhonasi ukukhokhelwa kwabasebenzi babo. Uma ufuna ububanzi obukhulu bamathuba omsebenzi othakazelisayo, ovuzayo nesikhathi eside. Inkampani ye-G4S ingeyakho. Omunye izindawo ezinhle kakhulu zomsebenzi wesikhathi eside e-UAE. Lona inkampani lapho ungenza ngempela umehluko ekuvikelekeni umsebenzi e Dubai.
Emisebenzini yokuphepha emakethe yase Dubai. I-G4S yindawo enhle kakhulu kuwe uma uhlola imisebenzi yangezizwe zangaphandle. Nge-G4S ngeke uthole okuhlukahlukene nokuhlukahluka amathuba emisebenzi noma kuphi nezinye izinkampani.
Iqembu Lokuqala Lokuvikela
Enye inkampani enentshisekelo yiQembu Lezokuphepha Lokuqala. Le nkampani ngamandla qaphela ukuthi impumelelo yeMpumalanga Ephakathi. Iqembu lokuqala lokuvikela lixhomeke ekuqashweni kwabantu abasha. I-firm ikholelwa futhi ihlakulela uhlelo lonke. Ezinye zezindleko zisebenza nazo le nkampani kanye nokushintsha okunamandla kokuphepha e-Dubai. Ngakho uma ufuna imisebenzi yokuphepha e-Dubai. Iqembu lokuqala lokuvikela elawula abantu abahlukile. Futhi ube omunye wabo njengoba nje i-expat entsha iwufanele ngempela.
Iqembu lokuqala lokuphepha linomsebenzi obaluleke kakhulu. Siza eMpumalanga Ephakathi ngoba iqinile ukuhlinzeka ngemvelo yokusebenza. Ngale nkampani, ungakwenza phatha izifiso zomsebenzi ngamunye. Iningi labasebenzi lisebenzela amakhono abo futhi likhuthaza ukukhula komuntu siqu. Ukuphepha kokuqala Umsebenzi weqembu ubonakala kakhulu e-Dubai. Futhi, izinhlelo zokuthuthukiswa zisekelwa emakethe amaningana e-UAE.
Le nkampani isebenza kahle ukuqinisekisa ukuthi izivakashi ze-UAE zigcinwa. Amaqembu okuphepha okuqala aba yinkampani esezingeni lomhlaba ngaphakathi kwezikhungo zokuqeqeshwa nezindawo ezintsha kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, zitholakala kubo bonke abantu abasha Ngaphakathi inkampani nabasebenzi abasha. Abantu abaphatha izinkontileka eziningana kulo lonke inhlangano. Ngenhloso yokuphatha izinkontileka zokugcina izimali e-UAE, inkampani eyenza abasebenzi bayo indlela entsha yokuthuthukiswa kwemisebenzi yabo. Ekugcineni, leyo nkampani iyaziqhenya kakhulu ngekhampani yethu yenkampani.
Sicela uxhumane nomnyango wethu we-HR ufaka ikhophi ye-CV yakho info@firstsg.com.
Inkampani yezokuphepha ye-Hawk
E-Hawk Security Services, enye inkampani eqasha e-UAE. Ngaphansi kwalezo zimo, amathuba okuqashwa avulekele abafudukayo abasha. Indawo yale nkampani i-United Arab Emirates. Inkampani enhle kakhulu ukusebenzela njenge-expat. Ngoba inkampani inendlela ehlukile kakhulu futhi ehlukahlukene. Ikakhulu umsebenzi omusha eDubai, USharjah no-Abu Dhabi.
Inkampani yokuphepha ye-hawk ine-site ehlukile izindawo ngaphakathi kwe-UAE. Empeleni abasebenzi abaningi kulo lonke elase-United Arab Emirates bethola umsebenzi eDubai. Ngokuvamile, uma ukhona unentshisekelo yokuqashwa ngomunye wabaqashi abaphezulu embonini yokuphepha. Inkampani yezokuphepha ka-Hawk izokwazi ukukusiza ngokuzihlakulela njengomchwepheshe wezokuphepha.
Ziningi izinzuzo ongazithola inkampani yezokuphepha yeHawk. Kusukela ujoyina ukuqeqeshwa futhi qala ukuthuthukisa umsebenzi wakho nalokhu okuqinile. Ngokuqinisekile, uzothola uhlelo oluhle lokusebenza. Kufanele uze ujoyine izinsizakalo zezokuphepha ze-Hawk e-United Arab Emirates. Ngakho le nkampani Kuhle kakhulu ukuthuthela e-Dubai.
Thumela okuqhubekayo kwakho Email: hr@hawksecurityservice.com
Service Guard Security Service
I-Guardforce Security Services inikeza izixazululo eziningi zokuphepha. Ungabekwa ukuphepha kwakho umsebenzi e Dubai noma e-Abu Dhabi. Ngokuvamile, i-Guard Force Security Service iyinhlangano kuvunyelwe nguMnyango WezamaPhoyisa WaseDubai Wezokuvikela (i-DPS). Inkampani ihlose ukuze ube mkhulu kunabo bonke e-United Arab Emirates. Ngokuqapha Kwezokuphepha ungathola umsebenzi njengomsebenzi noma umphathi.
Ohlangothini olubi, ngenkathi uya emhlanganweni nalenkampani. Kumele ukuhlangabezana nemfuneko encane yokuba isisebenzi. I-Guard Force Security Service inezinkampani eziningi zamazwe ngamazwe kanye nezendawo ezivela e-United Arab Emirates. Ungaba nethuba lomsebenzi ngaphakathi a izimboni ezahlukahlukene. Ngokuhamba kwesikhathi, ungakhetha kwezokuthengisa, ezezimali noma ukuqashwa ngokuphepha kwezemfundo. Kuze kube sesikhathini samanje, inkampani iqasha izinkampani zokungenisa izihambi. Esikhathini esingaphambili, ezinye izinkampani zentengiso kanye nezinkampani zezimboni ziye zasebenzisana ne-Guard Force Security Service.
They are also hiring for Imisebenzi ye-CCTV eDubai
Nasi isixhumanisi lapho kufanele ubhalise khona http://guardforce.ae/career/
IDubai City Company manje ihlinzeka imihlahlandlela emihle yemisebenzi eDubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu I-Dubay expats. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje ungathola izinkomba, amathiphu nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.